A Full Guide downgrade si Yosemite ka Mavericks s
Ịchụkwudo na ọhụrụ Mac OS X Yosemite-enweghị na-eche echiche nke ọma, ma ugbu a, nwere nsogbu na ya? Ụfọdụ ngwa adịghị arụ ọrụ dị ka ha na-eji, Finder mkpọka mgbe ị ịdọrọ faịlụ, Ndi ana-akpo ngwa kwụsịrị na-atụghị anya, ma ọ bụ ihe dị ka ndị a. -Esi ike gwụrụ nke emechu ihu atụmatụ na chọrọ downgrade si Yosemite ka Mavericks iji nweta ihe niile azụ nkịtị? Ọ bụrụ na ee, ị ga-abịa-nri ebe, isiokwu a na-enye gị a zuru ndu na-esi eme ya.
Part 1. ndabere niile tupu iwepụ ka Mavericks si Yosemite
Part 2. Nzọụkwụ na Downgrade Yosemite 10.10 ka Mavericks 10,9
Part 3. Weghachi Data mgbe iwepụ ka Mavericks si Yosemite
Ọ bụrụ na ị arụnyere Yosemite na ike dị mkpa ọdịnaya ị ga-amasị-edebe, ị ga mma ndabere ha na mbụ. Oge Machine bụ ezi mmasi maka gị. Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. On gị Mac, gaa na elu akaekpe na pịa Apple akara ngosi. Na ndọpụta menu, pịa System Mmasị ....
Nzọụkwụ 2. Ọ na-ewetara elu System Mmasị window. Gaa chọta Time Machine na pịa ya.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị mpụga ike mbanye na Mac na eriri USB.
Nzọụkwụ 4. Na ekpe kọlụm, gbanye Time Machine. Mgbe ahụ, pịa Họrọ Disk .... Na mmapụta ala menu, họrọ gị mpụga ike mbanye. Pịa Iji Disk
Nzọụkwụ 5. On ala akara nke Time Machine window, nne Mmetụta Gosi Time Machine na menu mmanya.
Nzọụkwụ 6. Control pịa Time Machine akara ngosi. Na mmapụta dialog, pịa Back Up Ugbu a.
Kwụpụ 7. The Back usoro amalite. Chere ruo mgbe ndabere usoro completes.
Nzọụkwụ 1. Download Mavericks na Mac App Store.
On gị Mac, pịa Finder> Ngwa> App Store. Nke a na-elu App ụlọ ahịa window. Gaa ịzụrụ taabụ ma banye na gị Apple ID. Mgbe ahụ, pịgharịa gaa na ala ihe ndị i ibudata ma ọ bụ dejupụta Mavericks na search igbe na elu nri akuku ịchọta Mavericks. Ọ bụ a 5,33 GB faịlụ na ga-awa rụchaa nbudata. Biko chere ruo mgbe ọ na-okokụre.
Ọ bụrụ na ị enweghị ike ibudata Mavericks na gị Mac, ị nwere ike ịgbanwe a Mac, karịsịa onye na-adịghị arụnyere Yosemite.
Nzọụkwụ 2. Download DiskMaker X na gị Mac
E wezụga Mavericks, DiskMaker X bụ ihe ọzọ na omume gị mkpa ibudata. Ẹkedori peeji a na ibudata DiskMaker X na gị Mac. Mgbe nbudata na dechara, na-aga ahụ DiskMaker X. Mepee DiskMaker X na ikpuru na dobe ya Ngwa.
Nzọụkwụ 3. Fanye a USB isi mkpịsị aka mbanye na ọ dịkarịa ala 8 GB nchekwa.
Nzọụkwụ 4. Gaa Ngwa na abụọ pịa DiskMaker X. Nke a na-elu a dialog, na-arịọ gị nke version nke OS X na ị chọrọ ka buut. Họrọ Mavericks (10.9).
Nzọụkwụ 5. Mgbe ahụ, DiskMaker X amalite anya n'ihi na Mavericks-akpaghị aka. Ozugbo ọ chọtara Mavericks, click Jiri a oyiri. Ọ bụrụ na Mavericks-apụghị ịchọta, i kwesịrị agagharị gị Mac ma họrọ Mavericks site onwe gị.
Nzọụkwụ 6. Pịa bọtịnụ maka gị isi mkpịsị aka mbanye, dị ka 8GB USB isi mkpịsị aka mbanye.
Nzọụkwụ 7. Họrọ Wụnye OS X Mavericks na pịa Họrọ a disk.
Nzọụkwụ 8. Go pịa ihichapu mgbe ahụ kee disk.
Nzọụkwụ 9. Click Gaa n'ihu na dejupụta gị Administrator aha na paswọọdụ. Mgbe ahụ, pịa OK.
Nzọụkwụ 10. DiskMaker X amalite idetuo faịlụ. Chere ruo mgbe ọ na-okokụre.
Nzọụkwụ 11. Mechie gị Mac na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe ahụ, jide na Option isi na keyboard ma họrọ Wụnye OS X Mavericks.
Nzọụkwụ 12. Mgbe ọ na-booted, ị nwere ike họrọ Disk Utility na pịa Gaa n'ihu. Mgbe ahụ, họrọ gị Mac Draịvụ aha ya bụ Macintosh SSD ma ọ bụ ndị ọzọ. Pịa ihichapu ....
Nzọụkwụ 13. Laghachi isi nhọrọ ma họrọ Wụnye OS X na pịa Gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 14. Ke Wụnye OS X window, pịa Gaa n'ihu wee họrọ gị họọrọ ike mbanye Macintosh SSD ma ọ bụ ndị ọzọ. Pịa Wụnye.
Nzọụkwụ 15. The echichi nke Mavericks amalite. Ọ na-ewe a obere oge. Chere ruo mgbe echichi okokụre.
Ọ bụrụ na i mere ndabere site Time Machine, ma na-achọ weghachi gị Mac, biko gaa na-agụ Part 3.
Ugbu a, ị ọma alaghachiwo Mavericks si Yosemite. Ọ bụrụ na i kere backups site na iji Time Machine dị nnọọ ka m kwuru n'elu, ị nwere ike iweghachi gị Mac.
Abụọ nzọụkwụ n'okpuru n'ezie na-ebu na nzọụkwụ n'elu. M ikewapụ ha kpọmkwem na-agwa gị otú iweghachi gị Mac mgbe Reverting si Yosemite ka Mavericks.
Nzọụkwụ 1. Na Migration nnyemaaka. Gaa a ngalaba - Họrọ a ụzọ nyefee gị ọmụma? Na nne Mmetụta Site a Mac, Time Machine ndabere, ma ọ bụ mmalite disk. Pịa Gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Time Machine ndabere na pịa Gaa n'ihu. Mgbe ahụ, kwasie ákwá ike ruo mgbe unu Mac e weghachiri eweghachi.
Ọ bụrụ na ị emeghị ka backups na-atụfu gị mkpa data, echegbula. Ị nwere ike isere nkwado site na ụfọdụ data mgbake ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Data Recovery for Mac iji nweta ihe niile azụ.
Naghachi Lost Files na OS X Yosemite
Olee otú iji tọghata MP4 on OS X Yosemite
Olee otú iji tọghata ọ bụla Video Files na Yosemite
Olee otú ịrụzi Registry Njehie na Computer
> Resource> Utility> A Full Guide downgrade si Yosemite ka Mavericks